ZIVA KAMNANDI KWIIMOVIE ZEHULU - IINDABA
Iifilimu ezili-12 zokuziva ulungile kwiHulu ukuze ubukele eli hlobo
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo bekunomceli mngeni wokuthetha okuncinci, kwaye uya kuxolelwa ukuba ufuna ikhefu kumjikelo weendaba ezinzima kunye nokungaqiniseki. Kuba ngoku ihlobo (uyakholelwa?), Lithuba elifanelekileyo lokuthatha ixesha lakho kwaye usasaze ezinye iimuvi eziva kamnandi ukubukela. Ukuqala, sidibanisa olu luhlu lucacile intle Iimuvi zokubukela ihlobo- kwaye zonke ziyafumaneka ukusasaza kwiHulu. Ukuba awunayo i-Hulu, unethamsanqa, kuba uHulu ubonelela abathengi abatsha ngenyanga yokuqala simahla. Funda ngoku, kwaye ukuba ufuna ezinye iingcebiso jonga ukujikeleza kwethu imovie ehlekisayo kwiHulu ngoku.
Iintliziyo ezibetha iLoud (2018)
Inkwenkwezi kaNick Offerman wePaki kunye noLonwabo, Iintliziyo Zibetha Ngokuvakalayo Ulandela utata ongatshatanga kunye nomnini wevenkile erekhodayo uFrank njengoko ejongene notshintsho olukhulu kubomi ngaxeshanye-intombi yakhe uSam sele eza kuya kwikholeji, kwaye unyanzelwa ukuba avale ivenkile yakhe. Bobabini uFrank noSam banomdla ekwabelwana ngawo womculo, kwaye iiseshoni zabo zeeveki zejam ngokukhawuleza zijika zibe yinto enzulu ngakumbi xa enye yeengoma zabo isiya kwintsholongwane. Ootata-ntombazana duo kunye nexesha lokufudumala kwentliziyo elandelwayo.
Njani uStella wayifumana kwakhona iGroove Back (1998)
Inkqubo ye- yakudala ngo-1998 rom-com Iinkwenkwezi u-Angela Bassett kunye no-Whoopi Goldberg njengabahlobo be-40-into eya eJamaica ifuna ikhefu elililungeleyo. Ngelixa wayekhona, uStella (Angela Bassett) ujongene noWinston (odlalwa nguTaye Diggs), umfana omncinci, kwaye ugqibela ekhulisa iimvakalelo zokwenyani ngaye. Ngaba uStella noWinston baya kuyenza ukuba isebenze ngaphandle kokwahluka kweminyaka yabo kunye nomgama ngokomzimba? Thela iwayini kwaye ufumanise. (Qaphela: Lo mboniso bhanyabhanya uyafumaneka nge-add-on ye-HBO Max.)
Mamma Mia! Apha Siya Kubuya (2018)
Kula maxesha obumnyama, sifuna i-ABBA. Mamma Mia! Nako sisiya kwakhona ulandelelwano olufanelekileyo kwifilimu ka2008 edlala uMeryl Streep kunye noAmanda Seyfried, kwaye uchola noSophie (Amanda Seyfried) ukulungisa i-taverna yamaGrike kunye nokukhumbula nabahlobo bakudala kamama kunye nabathandi bakhe malunga nehlobo laseSophie. Yahlula phakathi komhla wangoku kunye no-1979, kunye noLily James odlala uDonna omncinci. Kukho ukucula, ukudanisa, ubuhle baselwandle, kunye neCher-yintoni enye onokuyicela? (Qaphela: Lo mboniso bhanyabhanya uyafumaneka nge-add-on ye-HBO Max.)
Iyelenqe le le movie ujikeleza kumqeqeshi wokuthandana ogama linguAlex Hitch Hitchens (odlalwa nguWill Smith), obhaliselwe ukunceda uAlbert (Kevin James) aphumelele iAllegra entle (Amber Valletta). Kwangelo xesha, uHitch uzifumanisa ewela uSara (u-Eva Mendes), intatheli ye-tabloid ebonakala ngathi ayikhuselekanga ngamakhubalo kaHitch. Bobabini ubudlelwane busemngciphekweni xa uSara efumanisa inyani malunga neenkonzo zikaHitch. Ukukhanya kunye nokuhlekisa, le yenye yezo com coms ezingabonakali ziguga.
Ukudanisa okungcolileyo (1987)
Ngaba ikhona imovie ekhwaza ihlobo ngaphezulu kune Ukudanisa mdaka ? Abadlali bemidlalo bhanyabhanya uJennifer Grey noPatrick Swayze njengoMntwana noJohnny, abathandi beenkwenkwezi ezimbini abadibene neenkwenkwezi abadibana kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide eCatskills kwiminyaka yoo-60. Usana luhlala eholideyi kunye nosapho lwalo ehlotyeni, ngelixa uJohnny engomnye wabahlohli bomdaniso weholide. Xa usana luba liqabane likaJohnny lokudanisa, iintlantsi ziyabhabha-kodwa ngaba iyantlukwano yeklasi iyabagcina behlukene? Zama ukubukela indawo yokugqibela yomdaniso kwaye ungonwabi.
Ama-Asiya aCrazy Rich (2018)
Ngokusekwe kwincwadi ethengiswa kakhulu enegama elifanayo, Ama-Asiya aTyebileyo aTyebileyo Iinkwenkwezi uConstance Wu noHenry Golding njengoRachel noNick, isibini esiseNew York esiya eSwitzerland ngomtshato. Eli lixesha lokuqala uRachel edibana nosapho lukaNick, kwaye wakhawuleza wafumanisa ukuba abazizityebi ngokugqithileyo, kodwa uNick ngokwakhe uthathwa njengomnye wabafundi abafanelekileyo baseSingapore. Ngaba uRachel angaluphumelela usapho lukaNick? Inqaku: Ukulungiswa kwefilimu ka-China Rich Girlfriend, ukulandelelana kwencwadi, kusolwa ukuba iyasebenza. (Qaphela: Lo mboniso bhanyabhanya uyafumaneka nge-add-on ye-HBO Max.)
Ityala: UFrancois Duhamel / Imifanekiso yeAnnapurna
Iincwadi zeencwadi (2019)
I-Overachievers Amy (Kaitlyn Dever) kunye noMolly (Beanie Feldstein) bayenzile kude kube sekupheleni kwesikolo samabanga aphakamileyo bengakhange bathathe inxaxheba okanye bathandane, njengoko bebejolise kwi-laser kwizifundo. Xa beqonda ukuba abo bafunda nabo bangena kwiiyunivesithi ezidumileyo bengakhange benze wonke umsebenzi onzima abawenzileyo, abahlobo babini abagqibeleleyo bathatha isigqibo sokuba bafuna ukubuyisela ixesha elilahlekileyo-ukuqala ngepati enkulu yokuthweswa izidanga eyaphoswa ngomnye woontanga babo. Incwadi yeencwadi kukukhwela okumnandi okukhawuleza kube yiklasikhi yanamhlanje.
Oko Kufunwa Ngamadoda (2019)
Kwi Yintoni Amadoda Ayifunayo , UTaraji P. Henson udlala uAli, iarhente yezemidlalo esandula ukudluliselwa kunyuselo olukhulu. Emva kokusela umxube awunikwe ngugqirha kwitheko lomhlobo wakhe i-bachelorette, uAli uvuka ekwazi ukufunda iingqondo zamadoda. Ngombulelo kwisipho sakhe esitsha, uAli uyakwazi ukuguqula iitafile koogxa bakhe abangamadoda, kodwa oko kumfaka engxakini nabahlobo bakhe kunye noWill (Aldis Hodge), uthando olutsha. Ngomlingisi obandakanya uTracy Morgan kunye noPebeebe Robinson, Into efunwa ngamadoda yinto eyonwabisayo yokwenene.
Yigobe njengoBekkham (2002)
Iklasikhi yokuqala, Yigobe njengeBekkham amaziko kuJess (Parminder Nagra), onabazali abangqongqo baseIndiya bamnqande ukuba angadlala ibhola ekhatywayo. Ngenye imini, uJules (Keira Knightley) ubona uJess edlala kwaye uchukumisekile ngokwaneleyo ukuba amcele ukuba adlalele iqela le-semi-pro eyinxalenye yalo. UJess uyavuma, kwaye uqala ukudlala ngokufihlakeleyo ukuze abazali bakhe bangafumani. Ukuba uziva-mnandi yile nto uyilandelayo, awungekhe wenze ngcono kunale-kunye, kumnandi ukubukela uKeira Knightley kwindima ukusuka ngaphambi kokuba adume.
Inkxaso yamantombazana (2018)
ULisa (uRegina Hall) ngumphathi we-Double Whammies, ibha yezemidlalo enama-waitress anxibe iimpahla ezimdaka. Ukuzikhusela nokukhulisa abasebenzi bakhe, uLisa unethemba elingenasiphelo nangona engumphathi ongenamsebenzi, abantu abasebenza nzima, iingxaki zobudlelwane, kunye nomntu okhuphisana naye osongela ngokuthatha ishishini lebar. Xhasa amantombazana Akucaci ukuba kuyasivuyisa, kodwa imizuzu engama-20 yokugqibela noLisa, Maci (Haley Lu Richardson), noDanyelle (Shayna McHayle) bubungqina obunyanisekileyo kumandla obuhlobo babasetyhini.
Umdlali weenkwenkwezi odlala rhoqo u-Jesse Eisenberg kunye no Kristen Stewart, Iindawo zokuzonwabisa Ulandela uJames (Jesse Eisenberg) ngehlobo lowe-1987 njengoko eqala umsebenzi wehlobo kwipaki yomxholo eNtshona Pennsylvania (esekwe eKennywood, kuye nakubani na oqhelene nommandla wasePittsburgh!). Ihlobo lakhe elidikayo liqala ukukhangela xa edibana no-Em, umntu asebenza naye omgcina ngobusuku obunye kumthengi okopayo. Uthando lwasehlobo lwaseNostalgic! (Qaphela: Lo mboniso bhanyabhanya uyafumaneka ngokongeza kwi-STARZ.)
Isikeyiti ekhitshini (2018)
Ngokusekwe kwiqela lokwenyani labadlali ababhinqileyo abasetyhini eNew York, Isikeyiti ekhitshini Ulandela uCamille (uRachelle Vinberg), ulutsha lwaseLong Island oluye lube nomdla kwiqela labadlali besikethi esixekweni. Uyamkelwa ngokukhawuleza liqela ngaphandle kokungavunyelwa ngunina, kwaye akhulise ubudlelwane obusondeleyo nabahlobo bakhe abatsha. Zonke ii-skaters zidlalwa ngamalungu eSkate Kitchen, kwaye akukho namnye kuwo owayenamava okwenza ngaphambili, ekhokelela kwimuvi yokwenyani ebhiyozela ubuhlobo babafazi kulutsha lonke.
UNicole ubhala ngokuthenga kunye neemveliso zonyango lweZindlu, kodwa izinto anomdla kuzo ngamakhandlela, izinto zokulala, ibhafu kunye nayo nayiphi na into eyenzelwe ekhaya. Usebenze iminyaka emithathu ebhalela i-AT.
Indlu ese 'Winchester' yindawo eyiyo, kwaye inobuchule
Iinkqubo ezili-10 zoMbala eziKhuthazayo zokuKhuthaza indawo yakho eNtsha
Ezona Milo ziBalaseleyo zabaLalayo
I-10 enkulu ye-DIY yangaphandle yokudlala iitafile
Ithetha ntoni i-222?
Ithetha ntoni i-1111